TODDOBAADKA IYO QORAALADII WARDHEERE
Soomaalida Minnesota oo aad oogu raaxaysanaysa af Soomaaliga iyo dhaqan Soomaaliga.
Rush Limbaugh: In badan ayuu ku celceliyay in kuwa daroogada gadaa la xiro asagii ayaa qirtay inuu daroogada isticmaalo.
Talyaaniga: Maalinkasta oo Jimco ah in la soomo waa haboon tahay!
Winona, Minnesota: Ardada Hub waa la imaan karaan dugsiga .
Qofka bani’aadamka ma oga muhimada ay leeyihiin waxyaabo badan ilaa uu u soo baahdo badanaa sida nabadda,caafimaadka, iyo nimcooyin badan oo ilaahay ku manaystay oo aanan halkan ku soo koobi karin. Qofka haddii uu garan waayo nimcooyinkaas waxaa laga yaaabaa in shukrintu ku yaraato. Qofwalba haddii uu baaro nimcooyinkaasi la siiyay iyo dadka aan haysanin waxaa u soo baxaya inuu qanacsanaan ka qaado waxa uu haysto haba yaraatee.
Soomaalida Minnresota maanta waxay isku haystaan nabad, dawlad iyo kala danbayn, iyo ayagoo dhaqankoodii wata. Waxaa laga yabaa qofka Soomaaliga ah ee Minnesota joogaa inuu gurigiisa oo nabad ah ka soo kaco maqaayad cunto Soomaali ka cuno (Shaah Soomaali, Muufo, Canjeero, hilib geel, hilib ari, baasto, bariis, sambuusa), salaadda jamaaco ku soo tukado, tafsiir soo dhagaysto ama muxaadaro, Soomaali kale la soo cawaysimo, raadiyo af Soomaali ah dhagaysto, joornaal af- soomaaliya soo qaato oo aqristo gurigana ku fiirsado TV Soomaali ah oo wata madadaalidiisii, wacdigiisii iyo warbixintiisii.
Abwaan Soomaaliyeed baa yiri “ Magli inuu af weyn yahay ninkii uu midigta gooyaa og.
Walaal inuu macaan yahay ninkii madi ahaa og”.
Ardaygii Soomaali ah oo wax ka dhigta Minneapolis iyo nawaaxigeeda ma cidloobayo oo waxaa hareerihiisa dhooban arday kale oo Soomaaliyeed. Sida ay ku talinayaan dadka ka fekera mustaqbalka Soomaalida America ku nool waxay leeyihiin in la isu dhowaado oo aan la kala fogaanin waxaa ku badbaadaya diinta caruurteena, afka Soomaaliga, iyo isjecelka Soomaalida. Waxaa ayadana xusid mudan in ay jiraan dad dhalaan u badan in ay ka qatan yihiin raaxada af soomaaliga aan ka soo hadalnay waayo joornal af soomaalia ma fahmi karaan..
Maalin Taariikhda Minnesota ku madaw (xasuuq 1920)
Maanta oo Duluth Minnesota laga xusay dilkii 3 nin oo madow ah 83 sano ka hor
Elias Clayton, Elmer Jackson, IsaacMcGhie waxaa la dal dalay 83 sano ka hor ayagoo magaalada u yimid inay madadaalo ka sameeyaan. Dhallinyaradan madawga ahaa waxaa lagu eedeeyay inay kufsadeen gabar cadaan ah oo 19 jir ah ayadoo aanan wax cadayn ah keenin.
5000 ilaa 10,000 oo qof ayaa habeen xoog ku soogalay xabsigii ay ku xirnaayeen wiilashaas la dilay oo xoog kula baxay. Waxayna iska dhega tireen codsigii ka yimid kaniisadda iyo sarkaalkii booliis ah ee meesha joogay ka dibna mid mid ayaa loo dal dalay ayagoo leh “war yaan nala dilin waxba ma galbsane”. Wiilashaas waxaa loo dilay inay madaw ahaayeen ayagoo safar ku ahaa magaalo aan madaw laga aqoon halkaas oo la yiraahdo Duluth 1920.
Dhaqanka ah in dadweynaha sharciga iyo go’aanka gacantooda ku qaata ayadoo aanan maxkamad la gayn eedeysanaha ama daliil iyo baaritaanba aanan la samayn waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa “mob jusice” anigu kuma arag kelamdaas afka Soomaaliga sababtana waxaan u malaynayaa in aanay dhaqanka soomaalida ka mid ahaan jirin ee ay tahay wax jaahili ah oo aanan islaamka iyo dhaqankii hore ee Soomaalida aanan lagu ogayn.
Meeshii iigu horaysay oo aan ku arko mob justice waxay ahayd Kenya oo qofkii la yiraahdo waa tuug asagoon maxkamad la gayn lana hubsanin lug baabuur madaxa loo geliyo dabna la qabadsiiyo isla markiiba dhagax iyo wax kasta lagu dilo. Annaga gudniinka fircooniga ayaa noo bedelay caado xumidaas iyo kuwa kale.
Dilka wiilashaas oo lagu dilay dhagax iyo garuumo si waxashnimo ah waxay noqotay baal madaw oo taariikhda Minnesota gala oo sanad walba la xuso.
Mob Justice waxa Soomaalida uu ka bilawday markii dawladdiiSoomaaliyeed la riday oo jabhadaha ayaa soo kordhiyay intii dawlada laga helyona dhaqankan jaahiliga ah oo u dhigma casrul jaahiligii carabta duugi jirtay gabdhaha waa nala joogayaa.
Maanta 2000 oo qof oo uu horkacayo mayorka Duluth ayaa xusay dal dalkaas xaq darada ahaa oo taalo u taagay saddexdii nin oo la dilay Su’aashu waxay tahay taalo ama xus malala kala gaaraa dadkii badnaa ee Soomaaliyeed ee gardarada lagu dilay ? Jawaabtu waa maya laakiin maalinta xisaab alle ayaa ka danbaysa jabhadaha iyo dhamaan dabkii qubay dhiig Soomaali.
Waa nin leh barnaamij raadiyo iyo TV haystana dhagaytayaal gaaraya 20 million; waa nin aftahan ah oo maadeyn badan; waana nin taageera xisbiga republicanka ee Maraykanka oo la aaminsan yahay inuu ka danbeeyay guulihii xisbiga ee sanadahii danbe. Waa nin aad ugu dheeraaday sidii loo xiri lahaa qofkii daroogada si aan sharci ahayn u isticmaala; waa nin faaladiisa laga daayo 600 oo radio iyo dhawr TV. Waa nin aad u xag jira oo ah muxaafid oo ku ad adag dan yarta iyo kuwa laga badan yahay naxariisna aan looga baran--- laakiin usbuucan xaaladiisa ma fiicnayn
Rush Limbaugh waxaa iskugu darsamay labo shil
1) TV cayaaraha oo uu ka shaqayn jiray oo uu isaga tegay ka dib markii hadal qalad ah afkiisa ka soo yeeray asagoo ka baqay in TV la dacweeyo ( Wuxuu yiri nin madaw oo cayaartoy ah uma qalmo ee meesha waxaa loo geeyay qalabka warbaahinta inay arkaan in nin madaw ah cayaarayo)
2) Gabadhii u shaqaynaysay oo daroogada u soo gadaysay oo fashishay ka dibna uu qirtay inuu daroogada ku xad gudbo.
Arrimahan oo dhan waxay caawiyeen ninkii buuga cayda ah ka qoray oo beryahan suuq yeeshay. Buugaas oo la yiraahdo “doqonkii buurnaa ee weynaa”. Asagoo ku jeeda Rush Limbaugh.
God qayaano ha qodin ku dhici doontaana ma ogide!.
Halka meelo badan oo adduunka ka tirsan dadka macluul u dhintaan dalalka reer galbeedka ayaa waxa ka socda wal wal badan kaasoo ku saabsan buurnida haba u sii badnaadee maraykanka oo lagu qiyaasay saddex meeloodow labo meel inay dadkiisa buur buuran yihiin. Faransiiska ayaa ugu caatosan Europe. Galbeedka ayaad ku arkaysaa dadka oo waqtigooda gelinayaan inay ordaan ama iscaateeyaan oo qalab badan soo gataan waxaa kale oo aad arkaysaa in kaftanka iyo maadaytune u badan tahay buurnida caydana sidoo kale buurnida.
Caruurta buuran e iskuulada taga ayaa la kulma cay iyo fadeexayn badan oo la xiriira buurnida. Gabdho tiro yar ayaa cuntada iska dhaafa ilaa ay suuxaan oo beerku qalalo markaas ayaa isbitaalada loola cararaa si nafaqo loogu shubo kuwa waaba u dhintaan arrintaasi waxaa la yiraahdaa anorexia. Waalidiin badan waxa ay eedeeyaan qalabka warbaahinta reer galbeedka oo dadka u sheega waxa quruxdu tahay iyo waxa loo baahan yahay in la gato.
Haddaba dalka talyaaniga ayaa wasaaradda caafimaadka ay ka fakiraysaa in maalinta jimcaha la soomo si cayilku u yaraado. Arrintan ma noqon doonto mid qasab ah ee waxay noqon doontaa talo ka socota wasaadda caafimaadka ee talyaaniga.
Arrintaasi waa talo ay soo jeediyeen xubno ka tirsan gudiga gudoonka dugsiga Winona, Minnesota ayagoo aaminsan in ardada la baro sida fiican oo hubka loo adeegsado iyo sida loo xifdiyo; Haddii ay isku raacaan waa yeeli karaan waayo maraykanku go’aanada iskuulada waa awood u leh gudoonka oo ah xubno la soo doorto wax soo faragelin karaana ma jiro haddii aanay wax weyn dhicin.
Hase yeeshee arrintaas waxay noqotay la yaab waayo muddo dheer ayaa la oran jiray iskuulada hubka iyo daroogada ha laga ilaaliyo xataa aagga iskuulada. Waxaa taas ka daran toogashada ardada iyo dhacdooyinka ammaan darada iskuulada maraykanka oo beryahan ka sii darayay.
Gudoonka waxbarashada Winona arrintaas sahal kuma marsiin karaan waayo waxay u baahan tahay in waalidiinta laga dhaadhiciyo in caruur hubaysani aanay qatar ku ahayn ubadkooda.
Xubno ka tirsan gudiga gudoonka waxbarashada ee degmada Winoona ayaa ku dooday oo yiri “fiiri statistikada intii aan Minnesota lagu soo rogin sharciga tababarka hubka kontomeeyadii shilalaku waa badnaan jireen maxaa yareeyay? Ayaga ayaa isu jawaabay oo yiri “waa tababarkii hubka oo la soo rogay. Haddii ardada la baro hubka iyo sida wanaagsan oo loo isticmaalo ama loo xifdiyo kaas oo ay ku baranayaan iskuulka Winoona oo ay joogaam qubaro wax dhib ah kama imaanayo”.
Beryahan danbe dad qorshe u gooni ah wato ayaa faraha la soo gala iskuulada Minnesota waxaana ugu danbeeyay markii ay qaar xag jira ku soo rogeen dhowaan in ardada Isniin kasta istaagto oo qaado heesta calanka iyo qaranka. Sharcigan waxa uu ku bilawday in qofkii raba qaado heesta hadda se macalimiinta badankood waa dhaqan geliyaan oo xataa kii ka hara waxaa uu ka baqayaa inuu yahay macalin caasi ama bulsho qilaaf ama ardo qilaaf.
Waxaan kale oo aan ogsaaonahay in iskuulada ardada la is dacaayadeeyo lana is yaso oo aanay naxariisi oolin oo cadaadiska saaxiibadu aanan la caabin karin sidaa darted ardada badankood waa qaadaan ayagoo uu sharciga ogolyahay inuu xor u yahay.